प्रदेश प्रमुख डा. अहिराज भन्छन् : दलको होइन, देशको हुँ - A complete Nepali news portal based on news & views
१३ श्रावण २०७८, बुधबार २२:१२ July 28, 2021 Nonstop Khabar
प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुख डा.राजेश अहिराजले शिरमा देश र मनमा मधेश राखेर काम गरिरहेको बताएका छन् । जन्मभूमि प्रदेश २ को प्रदेश प्रमुखको रूपमा रहेका उनले शिरमा देश र मनमा मधेश राखेर काम गरिरहेको बताएका हुन् ।उनले प्रदेश प्रमुख दलको नभई देशको हुनुपर्नेमा जोड दिंदै आफू सोही मान्यता अनुसार अघि बढिरहेको बताए ।
‘देश, जनता र संविधानलाई पहिलो र महत्वपूर्ण आधार बनाएर प्रदेश २ भित्रका प्रत्येक नागरिकलाई साझा, शान्त, समृद्ध र समभावसहितको समाज, जात, जन्म, स्थान वा घनत्वको आधारमा दम्भ वा भय निर्माण भइरहँदा समाज अशान्त र नागरिक असुरक्षित हुनसक्छ, त्यसैले प्रत्येक नागरिकलाई साझा र अपनत्वसहितको प्रदेश निर्माणमा मेरो भूमिका कायम रहनेछ ।’ पदभार ग्रहण गर्दाखेरि उनले गरेको प्रतिवद्धताबाट आफू कत्ति पनि बिचलित नभएको उनले बताए ।
चन्द्रनिगाहपुर–लमाहाको बीचमा पर्ने लच्का नजिकै ना ५६ प ७३६५ र बिआर ३०जे ९३९७ नम्वरको दुई वटा मोटरसाइकल आपसमा ठोक्किएर दुर्घटना हुँदा मकवानपुर झझली गाउँपालिका २ का सुरज पहरी, पर्सा गढी नगरपालिका ३ का जीतबहादुर पहरी, सर्लाही मंलगवा नगरपालिका ८ का विकास यादव र उनका श्रीमती चित्ररेखा यादव घाइतेलाई प्रमुख अहिराजले गाडीमा आफ्नो सुरक्षाकर्मी साथै पठाएर चन्द्रपुर अस्पतालमा उपचार गराएका थिए । घाइतेलाई उपचारका लागि पठाएपछि मात्र उनी घटनास्थलबाट हिँडेका थिए । त्यसैगरी, कर्णाली प्रदेश भ्रमणको क्रममा ट्याक्टर दुर्घटनामा घाइते भएका चालकलाई समेत उद्धार गरी अस्पतालमा पु¥याएका थिए । मानिसहरुले उनको नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व बहन गरेको भन्दै प्रशंसा गरेपनि कतिपयले प्रमुख अहिराजले प्रचार स्टन्ट गरेको भन्दै आलोचना पनि गरे ।
‘नागरिकको जीवन रक्षाभन्दा ठूलो मेरो कुनै जिम्मेवारी छैन’, उनले भने,‘मेरो लागि नागरिकको ज्यान ठूलो हो । कार्यक्रम होइन । मैले सडकमा उपचारका लागि छटपटिएकाहरुलाई बचाउन पाए त्यही नै ठूलो कुरा हो ।’ उनले देशभक्ति, आतिथ्य सत्कार र समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास बोकेको प्रदेश २ मा सामाजिक विभेद अन्त्य गरी राष्ट्रिय एकतामा निरन्तर बल पु¥याउने कुरामा विशेष जोड दिँदै आएका छन् ।
प्रदेश २ प्रमुख अहिराजले प्रदेशमा समावेशिताको मुद्दा उठाएसँगै प्रदेश सरकारले अनुसरण गर्न थालेको छ । २०७२ असोज ३ गतेबाट लागू भएको संविधान समावेशी र समानुपातिक नभएको मधेशी दलहरुले दाबी गर्दै आएको छ । उनीहरुले समावेशी र समानुपातिकको मुद्दा उठाउँदै आएका छन् । मधेश आन्दोलनको बलमा बनेको प्रदेश २ को सरकारले समावेशी र समानुपातिकको मुद्दालाई वेवास्ता गर्दै आइरहेको छ । उसले कुनै पनि तहमा समावेशी र समानुपातिकलाई प्राथमिकथामा राखेन । त्यसै कारण प्रदेश २ मा विस्तार भएको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्को विषयमा प्रदेश २ प्रमुखले स्मरण गराउन बाध्य भएका थिए ।
जसपा भित्रको आन्तरिक कलहका कारण प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले पूर्णता नपाइरहेका बेला २ जनालाई भने नियुक्त गरिएको हो । यसअघि २०७६ भदौ २२ गते आयोगको उपाध्यक्ष प्रा.डा.भोगेन्द्र झा नियुक्त भएका थिए । उनको कार्यकालपछि आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा एक उपाध्यक्ष र एक सदस्य नियुक्त भएका थिए । जसको नेतृत्व डा.हरिवंश झाले गरेका थिए । २०७५÷७६ मा ३ सदस्य थप भई पदेन समेत गरी ७ सदस्यीय आयोग गठन भएको थियो । तत्कालीन उपाध्यक्ष रहेका डा.झासहित अन्य सदस्यहरुलाई काम गर्न नसकेको भन्दै हटाइएको थियो । त्यसपछि सदस्यहरुको नियुक्ति भएको थिएन ।
प्रदेश प्रमुखको पदभार ग्रहणपछि उनले देशभक्ति, आतिथ्य सत्कार र समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास बोकेको प्रदेश नं. २ को विविधतालाई अवसरको रूपमा लिने, अनुशासन, इमान्दारिता र माटोप्रति प्रेम कायम राख्दै प्रदेश नं. २ लाई सकारात्मक रूपमा उदाहरणीय बनाउने कार्यमा बल पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । आन्तरिक विभेद, असुरक्षा, कुनैपनि खाले दम्भ, अहंकार, दमन र अपराधलाई समाधान गर्दै जाने उनको ध्येय देखिएकोा छ । उनले भनेका छन्, युवामुक्त समाज, बालीमुक्त कृषि, भययुक्त भविष्य, सम्मानमुक्त जीवनले दीर्घकालीन पीडा दिन्छ । समभावमा आधारित समाज, देशप्रेमसहितको सोच, सवल नागरिक र गौरवान्वित भविष्यसहितको प्रदेश निर्माणमा मेरो भूमिका रहनेछ ।’
साथै, सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर १० गण सर्लाहीमा वृक्षरोपण कार्यक्रम पनि गरेका थिए । सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक सिपि गौतम, नेपाल प्रहरीको नायब महानिरीक्षक उमेश रन्जितकार, पत्रकार महासंघ सर्लाहीका सभापति टंक क्षेत्री लगायतले वृक्षारोपण गरेका थिए ।
# मन्त्रीहरुको शपथ ग्रहण अनिवार्य नेपाली भाषामै गराउन बाध्य बनाए ।
# मन्त्रिमण्डलमा महिलासहितको समावेशी हुनुपर्छ भनेर प्रदेश सरकारलाई दबाब दिए ।
# देशका सीमा स्तम्भ निरीक्षण गर्न सीमा क्षेत्रमै पुगे ।
# विधिसंवत् नभएका दुई विधेयक लिखित सुझावसहित फिर्ता पठाए ।
# प्रदेश सरकारलाई समावेशी बनाउन लिखित पत्राचार गरे ।
# सडकमा भेटिएका घाइतेको उपचारका लागि आफ्नै सवारीसाधन पठाए ।
# जातीय र सामुदायिक अतिवादलाई न्यून गर्दै समभावमा आधारित समाज निर्माणको पहल गरे ।
# शिरमा देश मधेशमा मन राखेर काम गर्न सबैलाई निर्देशन दिएर आफूले पनि गरे ।
# निजी स्वकीय सचिवालय नराखेर राज्यको पैसा जोगाए र निजामती कर्मचारीमै विश्वास राखे ।
# नागरिकको सुुखदुख बुझ्न घरआँगनमै पुगे, किसानको पीडा बुझ्न खेतमै पुगे र विद्यार्थीको पीडा बुझ्न विद्यालयमै पुगे ।
# अनाथ र दुखी पीडितलाई आफ्नै तलबबाट राहत वितरण गरे ।
# कार्यालयका करारमा रहेका सहयोगी र चालकलाई आफ्नो तलबबाट २०/२० लाखको जीवनबीमा गराईदिए ।